တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Sok Chea အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ကောင်စစ် ၀န် Ms. Dy Yoeun နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ ရုပ်ရည် သွင်ပြင်လက္ခဏာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ တွေးခေါ်မှု စသည်ဖြင့် တူညီမှုများစွာရှိကြပြီး ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေမှန်များ ကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက နားလည်ပေးပြီး အာဆီယံနှင့်တကွ နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ကုန်စည် ပြပွဲဆိုင်ရာများ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ၊ အားကစားဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ စေလွှတ်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား အပြန်အလှန် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြကာ တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ သွဂုတျ ၃၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံသို့ ပွနျလညျထှကျခှာတော့မညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကမ်ဘောဒီးယား နိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Sok Chea အား ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ကောငျစဈ ၀နျ Ms. Dy Yoeun နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနှငျ့ကမ်ဘောဒီးယားနှဈနိုငျငံအကွား နောကျခံသမိုငျးကွောငျး၊ ရုပျရညျ သှငျပွငျလက်ခဏာ၊ ယဉျကြေးမှု၊ ကိုးကှယျသညျ့ဘာသာ၊ တှေးချေါမှု စသညျဖွငျ့ တူညီမှုမြားစှာရှိကွပွီး ရှိရငျးစှဲခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ထပျမံတိုးမွှငျ့နိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏အခွအေနမှေနျမြား ကို ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံက နားလညျပေးပွီး အာဆီယံနှငျ့တကှ နိုငျငံတကာအလယျတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘကျမှ ရပျတညျပေးလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံအကွား စီးပှားရေးဆိုငျရာ၊ ခရီးသှား လုပျငနျးဆိုငျရာ၊ ကုနျစညျ ပွပှဲဆိုငျရာမြား အပွနျအလှနျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာ၊ အားကစားဆိုငျရာ၊ ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား စလှေတျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား အပွနျအလှနျ ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျလဲလှယျကွကာ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။